भागबन्डामै अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैभागबन्डामै अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ ।
– प्रधानमन्त्री देउवाका २२ दिन
– तीन दललाई मन्त्री छान्नै हम्मे
– को को छन् आकांक्षी ?
सोही कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले नेपाल नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागिताका लागि कुर्दै आइरहेको बताउने गरेका छन् । नेपालनिकट केही सांसद भने प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष मन्त्री बनाउन भन्दै धाइरहेका छन् ।
कोरोना भित्रिन नदिन सावधानी : अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सरकार सजग
अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो शिक्षकको
लकडाउन खुकुलो : केके छ व्यवस्था ?
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो